Olee otú Idozi iPhone Echo Nsogbu
Gị IPhone abụghị ihe anwụ anwụ ngwaọrụ mkpanaaka na-apụghị mebiri emebi, na otutu ọrụ na-eche ihu nkịtị mbipụta na ha amaghị ga-eme na ihe IPhone. Otu n'ime ndị kasị nkịtị mbipụta na ga-ewetara onwe ya ọtụtụ ugboro kwa, bụ nkuzi mgbamejije nsogbu. The nkuzi mgbamejije nsogbu bụ a na-akpata nsogbu na-IPhone ọrụ ịnụ onwe ha mgbe na-eme a oku na-aga onye ọzọ. Nke a bụ nnọọ manụ nke nwere ike ime ka ọrụ na ndị ọzọ na njedebe ka nwere ihe isi ike nụrụ ihe i na-ekwu kwa na ikekwe ghara ịnụ ihe ị na-ekwu ihe ọ bụla ma ọlị. Iji idozi IPhone nkuzi mgbamejije nsogbu mkpa ka ị were ya na-a teknishian ma ọ bụ nwere nke kpebiri onwe gị na ndị dị mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Part 1: Gịnị iPhone nkuzi mgbamejije nsogbu itịbe?
I nwere ike ịjụ onwe gị ma ọ bụ enyi, N'ihi gịnị ka IPhone nkuzi mgbamejije nsogbu-eme m IPhone? Na ịhụ ihe ọ bụla na-aza. Ma, e nwere ọtụtụ ihe mere ihe mere IPhone nkuzi mgbamejije nsogbu wee chee onwe ya.
Ihe nke mbu mere nwere ike ịbụ a emeputa nke. Ị nwere ike ịzụta ihe IPhone na-amalite na-enwe nkuzi mgbamejije nsogbu na otu ụbọchị nke Ịzụ, nke ga-egosi na e nwere kpatara na emepụta ọgwụgwụ. Na nkuzi mgbamejije nsogbu mere site emeputa, e nwere obere ihe ọ bụla i nwere ike ime iji nweta gị IPhone na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na-enweghị manụ nkuzi mgbamejije nsogbu. Ụfọdụ n'ime IPhone akụkụ na ngwa nwere ike ntụpọ na-na-na-eduga ná nkuzi mgbamejije nsogbu mgbe onye ọrụ a na-eji ngwaọrụ-eme ka a oku.
Ndị ọzọ karịa a emeputa nke ihe IPhone onye ọrụ nwere ike na-enweta manụ nkuzi mgbamejije nsogbu mgbe ihe Apple IPhone headset bụ mmasị na ngwaọrụ. The headset n'ụzọ ụfọdụ na-akpata na nnyonye anya ngwaọrụ triggering ọ bụ nye anya ihe nkuzi mgbamejije nsogbu nke nwere ike ịbụ nnọọ na-egbu mgbu na onye ọrụ ntị mgbe ụfọdụ. I nwere ike na-aghọta na na nkuzi mgbamejije nke nwere ike iche onwe ya mgbe ụfọdụ nanị mgbe ị na-eji ihe IPhone headset na ndị ọzọ na ugboro ekwentị arụ ọrụ zuru okè. Nke a na-mere site otu ihe iseokwu na headphone n'ọdụ ụgbọ mmiri na iPhone.
Otu IPhone na e gụrụ a otutu mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri, ọ ka na-arụ ọrụ nwere ike ịbụ na isiokwu ahụ nkịtị nkuzi mgbamejije nsogbu. The IPhone nwere ike dara na a ọdọ mmiri nke na ka na-arụ ọrụ ma obere ị maara na mmiri pụrụ iduga na nkuzi mgbamejije nsogbu. Ihe mere nke a mere bụ na eletriki dị n'ubi IPhone na-emetụta mmiri na seeped ya ụzọ n'ime ekwentị sekit osisi. A ga-emetụta ndị ọkà okwu na Maị nke IPhone na mgbe ahụ ịkpata a n'ihu nkuzi mgbamejije nke mgbe na-eme oku maka ihe atụ.
Otú e si edozi iPhone nkuzi mgbamejije mbipụta
Ndị a bụ nzọụkwụ na gị mkpa iji mgbe na-agbalị idozi IPhone nkuzi mgbamejije nsogbu. A otutu ndị ọrụ na-enweta na nkuzi mgbamejije nsogbu na-eche ihu ya n'oge oku na ọtụtụ ugboro banyere 2 nkeji ma ọ bụ otú n'ime oku. N'ihu na ntụziaka n'okpuru ka nke ofu.
Nzọụkwụ 1: Tụgharịa ọkà okwu na gbanyụọ - Ozugbo ị na-enwe na nkuzi mgbamejije nsogbu na ngwaọrụ gị, gbanwee ọkà okwu ọrụ na ngwaọrụ na gbanyụọ na nke a ga-dozie nsogbu ahụ nwa oge na mgbe ụfọdụ-adịgide adịgide. Ka ịgbanyụọ ọkà okwu ọrụ, mgbe na oku wepụ ihuenyo site ihu gị, na ọ ga-udo-elu otú ị pụrụ ịhụ na obere na-oku oyiyi. A ga-enwe ihe na akara ngosi na a Ọkà Okwu na ụfọdụ obere Ogwe na-yiri onye na a windows kọmputa. Họrọ akara ngosi ugboro abụọ na-atụgharị ya na anya. Nke a ga-edozi na nkuzi mgbamejije nke yikarịrị na nwa oge n'ụzọ ma n'ihi na ụfọdụ mmadụ ọ ga-adịgide adịgide ofu na nkuzi mgbamejije nsogbu. Ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ na-anọ nwa oge mgbe ahụ ị ga-mkpa-aga Ụkwụ na Ụkwụ 2 ka troubleshoot nke a bit ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Wepụ headset si ngwaọrụ - The ọzọ ihe ị chọrọ ime iji dozie na nkuzi mgbamejije nsogbu na gị IPhone, bụ iwepu ejikọrọ headset si ngwaọrụ. Ọ bụ a mara nke na mgbe ụfọdụ ndị headset nwere ike igbochi oku na-emepụta na nkuzi mgbamejije nke na ị na-enwe. Ọ bụrụ na ị wepụ headset na nsogbu ka nọgidekwara mgbe ahụ, ọ bụ oge na-aga Ụkwụ na Ụkwụ 3 ebe ihe ga-ntakịrị ọzọ obi abụọ kemgbe ngwaọrụ agaghị na-arụ ọrụ n'ụzọ ọ kwesịrị.
Nzọụkwụ 3: Reboot - The ike reboot nhọrọ! Ee, ị na-agụ n'ụzọ ziri ezi, a ọtụtụ ugboro gị IPhone nwere ike ịbịa a nsogbu na ị ga-esi otú annoyed ma gbanyụọ ma ọ bụ reboot ngwaọrụ na mgbe ahụ, ọ magically amalite na-arụ ọrụ otu ugboro ọzọ. Mgbe-enwe nkuzi mgbamejije mbipụta na ngwaọrụ gị ọ bụ omume na ị ga-idozi nke site n'ịrụ a reboot nke ngwaọrụ. Ozugbo i ọma mere ihe a, ị kwesịrị ị na ahụ na-agbalị ime ka a oku na-ahụ ma ọ bụrụ na gị nke bụ ofu. Ọ bụrụ na ọ bụ ofu, ị kwesịrị ị na-agbalị nzọụkwụ anọ nke bụ ikpeazụ resotu n'ezie.
Nzọụkwụ 4: Factory Iweghachite / Tọgharia - Nke a bụ ikpeazụ a na-kacha nzọụkwụ gwara gị IPhone si nkuzi mgbamejije nsogbu na ị nọworo na-enwe. Biko adịghị eji nke a nzọụkwụ gwụla ma ị maara kpọmkwem ihe ị na-eme ma Ọzọkwa ị ga-atụfu ihe niile na gị na ngwaọrụ ozugbo i mere ihe a nzọụkwụ iji tọgharịa ngwaọrụ gị ụlọ ọrụ ntọala. Resetting a ngwaọrụ bụ ụzọ kasị mma iji nweta ya azụ na-arụ ọrụ iji ọzọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta nhọrọ na-eji na ngwaọrụ ka na-adịghị arụ ọrụ, ọ bụ ukwuu na o kwere omume na e nwere ngwaike nsogbu ugbu na ngwaọrụ otú ị ga-abụ na-ewere ya na a emeputa ma ọ bụ gbaara dealer.
Iji tọgharịa IPhone, hụ na ọ na-kwadoro na na ịnyagharịa isi ntọala menu nke ekwentị site na ịpị ntọala na akara ngosi na ngwa ele. Mgbe a na-eme i nwere ike wee họrọ n'ozuzu nhọrọ na mgbe ahụ nrụpụta button na njedebe nke na peeji nke na i-eduzi. Ugbu a, na i mere ihe a ị ga-ahụ, ụfọdụ nhọrọ na ihuenyo, họrọ ma, ihichapu niile ọdịnaya na ntọala ma ọ bụ ihichapu niile ntọala. Biko mara na mgbe a na ogbo ọ bụ elu gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ihe niile site IPhone ebe nchekwa. Ọ bụrụ na i mere a ndabere mgbe ị nwere ike gaba ihichapu ọdịnaya niile na ihe niile ntọala nke bụ ihe kasị mma nhọrọ akpọghachite a ọhụrụ factory nrụpụta ekwentị.
E nwekwara ụzọ ọzọ i nwere ike ime nke a. Ị nwere ike ijikọ gị iPhone gị PC ma ọ bụ Mac ma malite iTunes usoro. Na iTunes ị ga-nhọrọ iji tọgharịa ngwaọrụ gị na otu ugboro pịa. Ịnyagharịa mmasị na họrọ nrụpụta ngwaọrụ. Chere ruo mgbe usoro na dechara na mgbe ahụ reboot ngwaọrụ.
Ọ bụ ya! Mgbe na-agbalị niile n'elu nlezianya a nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro ị kwesịrị inwe gị iPhone nkuzi mgbamejije nke kpamkpam kpebiri gwụla ma e nwere ngwaike nke na ngwaọrụ gị. Ozugbo ị na-aghọta na ọ dịghị nke n'elu na-arụ ọrụ, ọ bụ oge gị IPhone ka a emeputa ma ọ bụ gbaara dealer nwere ya dochie ma ọ bụ refurbrished.
Olee Otú M Pụrụ Watch Movies On iPhone
Olee otú mmekọrịta Playlist ka iPhone enweghị iTunes
iPhone Igwe okwu Nsogbu: Olee idozi ya
Otú nyefee foto site na igwefoto ka iPhone
Ga-eme tupu ere Your Old iPhone
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi site na iPhone 5S
Olee otú ele iPhone Kọntaktị na Computer
Nkuzi maka otú ka mmekọrịta Photos site na kọmputa na-iPhone
Top 5 iPhone Photo edezi égwu maka Dezie Photos on iPhone
> Resource> iPhone> otú ndozi iPhone Echo Nsogbu